Apple dia hamindra ny ampahany amin'ny iPad amin'ny iPhone 12 noho ny tsy fahampiana | Vaovao IPhone
Miaraka amin'ny fotoana fiandrasana ela handraisana ny iPhone 12 sy 12 Pro manerantany, Apple dia hametraka baiko mavesatra amin'ireo maodelin'ny iPhone teo aloha ary hamindra ireo faritra natokana ho an'ny iPad Pro amin'ny fanamboarana ny iPhone 12 Pro. Izany rehetra izany dia araka ny filazan'i Nikkei Asia tamin'ny fampahalalana farany azony jerena eto.
Ny fangatahana modely iPhone 12 Pro dia avo kokoa noho ny nandrasana avy any Cupertino. Izany no nahatonga azy ireo hanana olana amin'ny rojom-panolorana sasany amin'ireo singa toy ny puce na koa singa mpijery LiDAR.
Miorina amin'ny fampahalalana nomen'ny loharanom-baovao Nikkei Asia, Apple dia hamindra indray ireo singa izay hapetraka amin'ny iPad mivantana amin'ny iPhone 12 Pro. Izany rehetra izany dia tanjona amin'ny laharam-pahamehana ny tsy fahampian'ny singa miorina amin'ny fangatahana avo lenta amin'ity fitaovana ity. Ity famerenana ity mety hisy fiatraikany amin'ny maodely iPad roa tapitrisa eo ho eo, ka mahakivy ny drafitra famokarana ho an'ny iPad amin'ity taona ity.
Etsy ankilany, mba "hamenoana ny banga" eo amin'ny talantalana, dia mangataka mpamatsy vola i Apple mba hanomana fitaovana maherin'ny 20 tapitrisa eo anelanelan'ny iPhone 11, iPhone SE ary iPhone XR ho tonga alohan'ny fampielezana ny Noely sy ny fiandohan'ny taona.
Io fangatahana io dia mitovy amin'ny mihoatra ny ampahefatry ny fangatahana nataon'i Apple ho an'ny iPhones 12, izay manodidina ny 70 na 90 tapitrisa unit. Nikkei Asia dia milaza fa misy ny fangatahana iPhone 11 sy iPhone SE manakaiky ny 10 tapitrisa unit ary izany manana fisintahana betsaka kokoa noho ny andrasana amin'ny mpanjifa izy ireo.
Ireo iPhone 11, iPhone SE ary iPhone XR vaovao rehetra dia hamidy miaraka amin'ny fepetra efa noraisin'i Apple aza ampidirina ao anaty boaty iray ihany ny adapter charger sy ny EarPods. Mandritra izany fotoana izany, ny iPhone 11 Pro sy Pro Max dia efa nahatratra ny fiainany vokatra ary tsy misy maodelin'ireto fitaovana ireto intsony no hamokarana. Mba hahitana azy ireo dia tsy maintsy ataontsika amin'ny fivarotana antoko fahatelo izay mbola ananan'izy ireo amidy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 12 » Apple dia hamindra ny ampahany amin'ny iPad amin'ny iPhone 12 noho ny tsy fahampiana
Sary voalaza fa famolavolana ny famoahana AirPods 3